Free Online Poker in Myanmar, Play Singapore3Card Poker Game
ဒီတစ်ခါပြောပြချင်တာကတော့ စင်ကာပူပြည်တွင်းကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့3Card Poker ဆိုတဲ့ကစားနည်းအကြောင်းပါ။
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်း ကစားကြပေမယ့် အရမ်းခေတ်မစားပါဘူး။ ဒီကစားနည်းဟာ ကစားရလွယ်ကူပြီး အပျင်းပြေတဲ့အတွက် သက်ကြီးရွယ်အိုအများစုဟာ ပိုမိုကစားလေ့ ရှိပါတယ်။3Card Poker ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်း ဖဲသုံးချပ်နဲ့ကစားရတာဖြစ်ပြီး ဒိုင်ရဲ့ဖဲသုံးချပ်နဲ့ မိမိဖဲသုံးချပ်ကိုယှဉ်ကာ အနိုင်အရှုံးသတ်မှတ်ပါတယ်။ လျော်ကြေးငွေသည် ၁ဆဖြစ်ပြီး Bonus ဆိုသော လောင်းကြေးလည်းရှိပါတယ်။ Bonus ကတော့ ဖဲချပ်အပေါ်မူတည်ပြီး လျော်ကြေးငွေအဆပေါင်း အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ဆက်လက်ပြောပြပါ့မယ်။
3 Card Poker စားပွဲဟာပုံမှန် Casino စားပွဲများလိုဖြစ်ပြီး အလယ်အလတ်ပုံစံမှာရှိပါတယ်။ စားပွဲအပေါ်မှာတော့ ဖဲထားရာနေရာ၊ လောင်းကြေးထည့်ရန်နေရာ၊ Bonus ထည့်စရာနေရာတွေ ရှိပါတယ်။ ပွဲမစခင်မှာ ဒိုင်မှလောင်းကြေးတွေခေါ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကစားသမားတွေက မိမိတို့ရဲ့လောင်းကြေးကို လောင်းကြေးထည့်စရာနေရာမှာ ထည့်ပေးရပါတယ်။ စားပွဲခုံမှာထိုင်ပြီး ဖဲကြည့်တဲ့ကစားသမားတွေရှိသလို အနောက်ကနေ မတ်တပ်ရပ်ပြီး လောင်းကြေးထည့်တဲ့ကစားသမားတွေလည်း ရှိတဲ့အတွက် လောင်းကြေးနေရာတစ်ခုကို ကစားသမား၅ယောက်အထိ လောင်းကြေးထည့်လို့ရအောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်။
ကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီအလိုက် လောင်းကြေးကို သပ်သပ်စီထည့်ပေးရပါတယ်။ ပွဲစပြီဆိုတဲ့အခါမှာ ဒိုင်ကလောင်းကြေးပိတ်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်း ကြေငြာပါတယ်။ ပြီးရင် ဖဲကဒ်တွေကို မှောက်လျက်အနေအထားနဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီ (ဝဲမှယာ) ဝေပေးပါတယ်။ ကစားသမားတွေ အားလုံး ဖဲကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ဒိုင်ရဲ့ဖဲကဒ်ကိုလှန်ပါတယ်။ ပြီးရင် ဒိုင်ရဲ့ဖဲကဒ်နဲ့ ကစားသမားတွေရဲ့ဖဲကဒ်ကို ယှဉ်ပြီး အလျော်အစားလုပ်ပါတယ်။3Card Poker မှာဖဲထုပ်တစ်ထုပ်သာ အသုံးပြုတဲ့အတွက် ပွဲတစ်ပွဲပြီးတိုင်း ဖဲဝေသူမှ (သို့မဟုတ်) ဖဲဝေစက်ဖြင့် ဖဲဝေပါတယ်။
3 Card Poker မှာ အနိုင်ရရှိတဲ့ကစားသမားတိုင်းကို ဝန်ဆောင်မှုကြေး ၅ရာခိုင်နှုန်း ကောက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ၅ကျပ်၊ ၁၅ကျပ်စတဲ့ မဂဏန်းတွေ လောင်းကြေးထည့်လို့မရပါဘူး။ ၁၀ကျပ်၊ ၂၀ကျပ်စသဖြင့် ဆယ်ပြည့်၊ရာပြည့်ဂဏန်းတွေပဲ လောင်းကြေးထည့်လို့ရပါတယ်။ ဒိုင်က အနိုင်အရှုံး နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ ဖဲသုံးချပ်ပေါင်းတန်ဖိုးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး အလျော်အစားလုပ်ပါတယ်။ ဖဲသုံးချပ်ပေါင်းခြင်း တန်ဖိုး၁သည် အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး ပေါင်းခြင်း၁၀သည် အကြီးဆုံးပါ။ မိမိရဲ့ဖဲသုံးချပ်ပေါင်းခြင်းသည် ဒိုင်ရဲ့ဖဲသုံးချပ်ပေါင်းခြင်းထက်ကြီးလျှင် ဒိုင်မှလောင်းကြေးငွေလျော်ပြီး ငယ်လျှင်တော့ ဒိုင်မှ လောင်းကြေးငွေ သိမ်းပါတယ်။
ဒီ ဖဲဂိမ်း မှာ Ace ဖဲချပ်ကို ဂဏန်း၁လို့ သတ်မှတ်ပြီး အငယ်ဆုံးတန်ဖိုးပါ။ J,Q,K ဖဲချပ်များကတော့ ဂဏန်း၁၀ အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာမှ 10သုံးလုံးသည် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး Bonus လျော်ကြေးအဆလည်း အများဆုံးပါ။ မိမိဖဲချပ်၃ချပ်တန်ဖိုးနဲ့ ဒိုင်ရဲ့ဖဲချပ်၃ချပ်တန်ဖိုးတူနေတဲ့အခါ ဂဏန်းအငယ်ဆုံး ဖဲချပ်မှ စတင်ကာ နှိုင်းယှဉ်ပါတယ်။
ဥပမာ-မိမိဖဲချပ်၃ချပ်သည် Q,3,2 ပေါင်းခြင်း၅ဖြစ်ပြီး ဒိုင်ရဲ့ဖဲချပ်၃ချပ်သည်လည်း J,3,2 ပေါင်းခြင်း၅ တန်ဖိုးအတူတူ ဖြစ်သည်ဆိုပါစို့။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ အငယ်ဆုံးဖဲချပ်2ကနေ စတင်ကာနှိုင်းယှဉ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သော 3ဖဲချပ်။ နောက်ဆုံး Jနဲ့Qဖဲချပ်အလှည့်ရောက်ရှိတဲ့အခါ Qသည်Jထက် ပိုကြီးသောကြောင့် တန်ဖိုး၅ချင်းတူညီပေမယ့် ဒိုင်ကိုအနိုင်ရရှိပါတယ်။ ခြွင်းချက်တွေကတော့ 10ဖဲချပ်သည် J,Q,K ဖဲချပ်များထက် တန်ဖိုးငယ်သော်လည်း 10ဖဲချပ်၃ချပ်ကတော့အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒိုင်နဲ့ကစားသမား ဖဲကဒ်ချင်းသာမကပဲ တန်ဖိုးချင်းပါတူနေတဲ့အခြေအနေမှာ ဒိုင်ကိုအနိုင်လို့သတ်မှတ်ပြီး လျော်ကြေးငွေကို သိမ်းပါတယ်။ အောက်ပါဇယားကတော့3Card Pokerရဲ့ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်တန်ဖိုးတွေပါ။
1 10, 10, 10
2 K, K, K
3 Q, Q, Q
4 J, J, J
5 ဖဲသုံးချပ်ပေါင်းခြင်းတန်ဖိုး 10(J, Q, K)
6 ဖဲသုံးချပ်ပေါင်းခြင်းတန်ဖိုး 10(A, 2, 3,…)
7 ဖဲသုံးချပ်ပေါင်းခြင်းတန်ဖိုး 9
8 ဖဲသုံးချပ်ပေါင်းခြင်းတန်ဖိုး 8
9 ဖဲသုံးချပ်ပေါင်းခြင်းတန်ဖိုး 7
10 ဖဲသုံးချပ်ပေါင်းခြင်းတန်ဖိုး 6
11 ဖဲသုံးချပ်ပေါင်းခြင်းတန်ဖိုး 5
12 ဖဲသုံးချပ်ပေါင်းခြင်းတန်ဖိုး 4
13 ဖဲသုံးချပ်ပေါင်းခြင်းတန်ဖိုး 3
14 ဖဲသုံးချပ်ပေါင်းခြင်းတန်ဖိုး 2
15 ဖဲသုံးချပ်ပေါင်းခြင်းတန်ဖိုး 1
Online Porker Games
Let’s play the world’s famous online poker game in Myanmar. You can play an online poker game in Myanmar at our JDBYG portal. We offer the best poker room for you to enjoy and you can play online poker games in different ways. We all know about the famous family card game called poker. If you want to play an online poker game in Myanmar, the biggest online tournaments are anywhere anytime online. If you areabig fan of poker games and want to get real money by playing it, you should carefully choose the game of your choice before signing up. Whatever your level of knowledge or skill, there isagame version that fits your skills. There are many versions of the game of poker, some of the online poker games are well known and played globally. You can also play Singapore3card online poker game in our portal and3card poker is one of the most popular games in Asia. This online poker game is not so popular in western countries but It is easy to learn and to play. The payout is 1x and there is alsoabonus. A bonus isavariety of compensations depending on the card. You can play3cards online poker games in our portal too. There are different ways of playing poker and poker has entered our lives and brought family and friends closer. You can pick your favorite type of poker online games and can also get real money by playing online. The advantage of playing poker online games are you can play with onlyamobile phone or computer, if you forget the rules, you can quickly see the exact rules at the click ofabutton. So let's play with our players of online poker games from all over Myanmar right now.
September 10, 2019 12:09 am
http://www.jdbyg.com ကိုနှိပ်ရင်ဂိမ်းထဲရောက်ပါတယ်၊ ဂိမ်းထဲရောက်ပြီဆိုရင်မန်ဘာဝင်ရန်အတွက် ဂိမ်းရဲ့ညာဘက်အောက်ဆုံးထောင့်မှာရှိတဲ့ Chat Box လေးကိုနှိပ်ပြီးအသေးစိတ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်(24 နာရီဝန်ဆောင်မှု)။